सावधान, के तपाई सेक्स गर्दा आत्तिनु हुन्छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
सावधान, के तपाई सेक्स गर्दा आत्तिनु हुन्छ ?
एजेन्सी । स्वभाविकरुपमा हुने यौन सम्पर्क भन्दा अन्य अवस्थामा पुरुषहरु निकै आत्तिने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अध्ययनका अनुसार, श्रीमती भन्दा बाहिरका महिलासँग सम्बन्ध गर्दा या बिहे अघिका परिस्थितिमा सेक्स हुँदा बढी आत्तिने देखिएको हो ।
सेक्सको सम्बन्ध वातावरणसँग सोझै जोडिने भएकोले यसरी आत्तिएर या हतारमा हुने यौनसम्बन्धमा पुरुष छिट्टै स्खलित हुने देखाइएको छ ।
सोसाइटी फोर सेक्सुअल बिहेभियरले गरेको अनुसन्धानमा सामेल पुरुषहरुले गर्लफ्रेण्डसँग सेक्स गर्दा आत्तिएको बताएका थिए । यसरी आत्तिँदा कतिपयले शीर्घ स्खलन भएको र नियोजनका साधन नहुँदा गर्भवती हुने खतरा पनि भएको बताए ।
यौनसम्बन्धमा आत्तिनु हुँदैन, अनुसन्धानमा भनिएको छ । धैर्य र एकदमै शान्त तरिकाले सेक्स गरे मात्रै स्खलन पनि ढीलो हुन्छ ।
अनुसन्धानमा सहभागी ३५ प्रतिशतले कण्डमको प्रयोग नभएको बेला यसरी ढुकढुकी बढेर आत्तिएकै कारण रोक्न नसकि भित्रै वीर्य खसेको र अनिच्छुक गर्भको अवस्था आएको बताए ।
पछिल्लो समयमा अविवाहित युवतीहरु गर्भवति हुनुमा यसरी आत्तिनु नै मुख्य कारण रहेको समेत अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ ।
शीघ्र स्खलनको एउटा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको आत्तिने, काँप्ने, मुटुको ढुकढुकी बढने जस्ता समस्या क मगर्न सेक्सलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।
यौन सम्पर्कको बेला अधिक उत्तेजना, तनाव या संवेदनशील बन्नु हुँदैन । अनुसन्धानमा भनिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न ६६ प्रतिशत विवाहित पुरुषहरुले भने आफ्नो श्रीमतीसँग नआत्तिने तर अन्य युवतीसँग सेक्स गर्दा पनि शुरुमा नै बेग्लै अनुभूति हुने बताए । सेक्स गर्नु अगावै बढी उत्तेजित भएजस्तो लाग्ने, मुटुको चाल बढने र यसले गर्दा झन छिटो स्खलित हुने उनीहरुको भनाई थियो ।
चिकित्सकहरु पनि यौन क्रिडालाई एकदम स्वभाविक बनाउनुपर्ने र सकेसम्म यसप्रकारका अस्वभाविक यौन सम्बन्धमा लाग्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।
ट्याग्स: सावधान, सेक्स